Fiofanana sy fifampizarana andiany faharoa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Edmondine.H il y a 1 moi
Nanomboka ny sabotsy 27 febroary lasa teo ny fampiofanana andiany faharoa omen’ny Amis De Lakroa (A.D.L), eto Fianarantsoa. Mampiantrano ny fiofanana ny mpiara-miombona antoka, ny U-magis, sekoly ambony mampianatra momba ny fambolena sy fiompiana, eo Antady. Tanora sy olon-dehibe manana ny mari-pahaizana Bakalorea, fara-fahakeliny ny mpiofana amin’ity andiany faharoa ity. Nahatratra 204 ny namaly ny antso. Tanjona ny hahitan’izy ireo fahombiazana amin’ny alalan’ny fananana fomba fisainana sy fiainana mifanaraka amin'ny fandraharahana (esprit et culture d’entrepreneuriat). Sehatra entina hamokarana harena ny fandraharahana. Tsy ampy anefa ny fivoizana azy ity eto amintsika. Hita taratra sy azo tsampain-tanana izany, raha ny lafiny toekarena eto Madagasikara no jerena.
Ny fandraharahana dia fananana asa mazava tsara
Maro ny antony mahatonga ny olona iray ho mpandraharaha. Mety noho ny lova azony, na ny tsy fananana asa na koa an-tsitrapo fotsiny izao. Vakisiny fanefitry ny fahantrana izy. Mitaky fahaizana mitantana matotra kosa anefa ny fanaovana azy. Tsy inona izany fa ny fitantanana ny olona ampiasaina, ny fitaovana, ny vola ary ny fotoana. Zava-dehibe ny fahasahiana sy ny fahaizana misedra olana amin’ny fandraharahana. Te hahomby amin’ny fiainana ny olona. Te hivoatra ihany koa. Maro ny te hamorona asa ho azy manokana. Tsy karohina lavitra fa efa ao anatin’ny olona ny fomba fisainana sy fiainana mifanaraka amin’ny fandraharahana. Ny famohazana azy ao an-tsain’ny mpiofana izao ataon’ny A.D.L izao, mba hivadika ho asa miteraka fahombiazana. Miankina amin’ny fitiavana ny asa ataonao ihany koa ny fahombiazanao.
Fampiofanana no iantsoana azy ity. Fa endrika fifampizarana kosa no itondrana azy. Mandray sy manovo izay sahaza azy ny tsirairay. Ny sekretera jeneralin’ny Amis de Lakroa, Randriarimanana Patrick, no nanantanteraka ny fampiofanana. Nanaraka fiofanana momba ny fandraharahana teto an-toerana sy tany ivelany izy. Misehatra ao anaty fandraharahana toy ny fananganana orinasa. Mitantana tetikasa fampiroboroboana ny eny ambanivohitra. Tsy misy sarany ny fampiofanana. Atao isaky ny sabotsy tolakandro. Ezahina hovitaina ao anatin’ny 7 sabotsy. Hisy ny fizarana fanamarinana (attestation) aorian’ny fiofanana. Rehefa mahazo maimaim-poana dia tokony hizara maimaim-poana.
Rocade d’Iarivo : Le projet de 8,2 km visant la fluidification du trafic urbain est quasi terminé - il y a 5 jours
Fambolena manara-penitra : Tantsaha tsy mampinono angady - il y a 1 moi